Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 14:10
659 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 13:19 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 14:10 (hanova) (esory)
==== Avaratra ====
NyLafy avaratra dia vazantaninitoeran'ny fahefanavintana [[Adalo]] sy ny fibaikoana ary[[Alohotsy]] ny fanjakanaavaratra. Ao an-trano dia atao eo afovoany mahazo avaratra ny fatana. LafyNy itoeranavaratra dia vazantanin'ny vintanafahefana sy ny fibaikoana ary ny fanjakana. Eo amin'ny misy ny [[Adalo]] syno toerana fanajam-bahiny indrindra ao an-trano. Tandrify ny [[Alohotsy]] no fametrahana ny avaratralovia sy ny sotro.
==== Avaratra adrefana ====▼
Ny lafin-tany avaratra-andrefana dia atao hoe [[Adijady]] ka ny lafin-trano avaratra-andrefana no omena azy.▼
==== Avaratra atsinanana ====
Ny zoro avaratra-atsinana no zoron'ny [[Alahamady]]. Ny zoro avaratra-atsinanana amin'ny trano no omena ny Alahamady izay atao hoe zorofirarazana koa. Atao hoe Alahamadintany ny tanana na ny faritra manandrify ny zoro Alahamady amin'ny tanana na faritra iray. Ny olona hajaina indrindra, raha misy fivoriana, dia asai-mipetraka eo amin' ny Alahamadintany.
==== Atsinanana ====
Lafy itoeran'ny vintana [[Adaoro]] sy [[Adizaoza]] ny atsinanana. Vazantany natokana ho an'ny vavaka sy ny [[Razana (finoana malagasy)|Razana]] ny atsinanana ao an-trano. Eo atsinanana tandrify y Adizaoza no ametrahana ny siny ao anaty an-trano. Lafy itoeran'ny vintana [[Adaoro]] sy [[Adizaoza]] ny atsinanana. Ny faritra avaratra amin'ny rindrina atsinana, tandrify ny Adaoro, no asiana ny farafara.
==== Atsimo ====▼
Ny atsimo ao an-trano dia vazantany natokana ho an'ny fanekena ny manam-pahefana, ny fanetren-tena, ny olona anjakana, ny maha mpanompo. Lafy itoeran'ny vintana [[Asombola]] sy [[Alahasaty]] ny atsimo. Eo atsimo manandrify ny Alahasaty (ilany atsinanana amin'ny rindrina atsimo) no ametrahana ny zanak'omby. Tandrify ny Asombola (ilany andrefana amin'ny rindrina atsimo) no ametrahana ny laona sy ny fanoto.▼
==== Atsimo atsinanana ====
Ny zoron-trano atsimo-atsinana no toerana omena ny [[Asorotany]].
▲==== Atsimo ====
Lafy itoeran'ny vintana [[Asombola]] sy [[Alahasaty]] ny atsimo. Ny atsimo ao an-trano dia vazantany natokana ho an'ny fanekena ny manam-pahefana, ny fanetren-tena, ny olona anjakana, ny maha mpanompo.
▲Ny atsimo ao an-trano dia vazantany natokana ho an'ny fanekena ny manam-pahefana, ny fanetren-tena, ny olona anjakana, ny maha mpanompo. Lafy itoeran'ny vintana [[Asombola]] sy [[Alahasaty]] ny atsimo. Eo atsimo manandrify ny Alahasaty (ilany atsinanana amin'ny rindrina atsimo) no ametrahana ny zanak'omby. Tandrify ny Asombola (ilany andrefana amin'ny rindrina atsimo) no ametrahana ny laona sy ny fanoto sady eo no mitoto vary.
==== Atsimo andrefana ====
Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena ny [[Adimizana]]. Eo no misy ny varavarambe amin'ny trano, izay ivoahana sy idiran'ny tsara sy ny ratsy.
==== Andrefana ====
Lafy itoeran'ny vintana [[Alakaosy]] sy [[Alakarabo]] ny andrefana. Faritra tsy madio sy tsy masina ary an'ny vahiny ny andrefana ao an-trano. Lafy itoeran'ny vintana [[Alakaosy]] sy [[Alakarabo]] ny andrefana. Ao amin'ny tapany atsimo amin'ny rindrina andrefana (manandrify ny Alakarabo) no asiana ny varavaranavaravarambe amin'ny trano, izay ivoahana sy idiran'ny soa sy ny ratsy. Tandrify ny Alakaosy no amelaran-tsihy hampandrosoana ny andriana. Eo koa no misy ny farafaran'ny vehivavy tera-bao izay akaikin'ny fatana ka tsara ho an'ny mpifana.
▲==== Avaratra adrefana ====
▲Ny lafin-tany avaratra-andrefana dia atao hoe [[Adijady]] ka ny lafin-trano avaratra-andrefana no omena azy. Atao hoe zorom-baravarankely koa ny eo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974801"